Masar 4 - 2 Soomaaliya - BBC Somali
Masar 4 - 2 Soomaaliya
Image caption Kooxda Kubadda Cagta ee Soomaaliya
Kooxda Soomaaldia ee da'doodu ka yar tahay 17 sano waxaa mar kale ka badisay kooxda Masar ee ay isku da'da yihiin.
Waxaa Soomaalida looga badiyay 4-2.
Guuldaradan ayaa ku soo beegantay, iyadoo la sheegay in ilaa 11 ciyaartoy oo ka tirsan kooxda ay ku dhex dhuunteen dalka Masar oo ay ka maqnaayeen ciyaartan. Maqnaanashahooda ayaa dadka qaar u aanaynayaa guuldarada labaad ee kooxda Soomaalida.
Ciyaartoyda la waayay, ayaa xoghayaha xiriirka kubadda cagta, Cabdiqani Siciid Carab uu BBC u xaqiijiyay, isagoo sheegay in 2 ka mid ah dib u soo laabteen oo u sheegeen in la qalday markii hore.
Dadka qaar ayaa sheegay ku tilmaamaya sababaha loo waaway dhalinyarada ciyaartoyda ah ay ugu wacan tahay ammaan xumidda magaalada Muqdisho oo aan ahayn meel si nabadgalyo ah loogu noolaan karo kubadna lagu ciyaari karo. Qaarkood, ayaa wararku sheegayaan in eheladooda u sheegeen in aysan laaban.
Dhinaca kale ciyaartii hore oo ka dhacday magaalada Qaahira ayaa saddex iyo eber looga bediyay Kooxda kubadda cagta Soomaaliya ee da'doodu ka yar tahay 17 sano, cayaar ay xalay kula yeesheen magaalada Qaahira, kooxda dhigooda ah ee dalka Masar.
Cayaarta ayaa ahayd mid aad u xiiso badan, markii ay taageerayaal badan oo Soomaalida ku dhaqan dalka Masar ay ka soo qeybgaleen, kuwaasi oo gacmaha ku sitay calanka Soomaaliya.
Saddexda gool ayaa kooxda Masar waxa ay dhaliyeen qeybtii hore ee cayaarta, iyadoo mid ka mid ah uu ahaa rigoore.
Kooxda Soomaalida ayaa waxa ay kulanka labaad la leeyihiin kooxda Masar kaasi oo ka dhacaya isla dalka Masar 12 bishan.
Kooxda Soomaalida ayaa sanadkan tababar dhowr toddobaad ah lagu soo siiyay dalka Qadar, iyagoona ka soo gudbay qaybtii ugu horaysay ee tartanka oo ay laba kulan oo ay la yeesheen Kenya ay mid badiyeen, kii kalena barbaro galeen.